အတွေးအမြင်များ: December 2007
ရေနံဈေးနှုန်း ကြီးမြင့်ခြင်းသည် အားနည်းသောဒေါ်လာနှင့် ဈေးကစားသူများကဲ့သို့ ပြင်ပအချက်များကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း ရေနံထုတ်လုပ် ရောင်းချသည့်နိုင်ငံများအဖွဲ့ (OPEC) မှ ပြောကြားခဲ့သည်မှာ နှစ်များစွာ ကြာခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ ယင်းအကြောင်းပြချက်များသည် အိုပက်၏ ရေနံတိုးမထုတ်သောလောဘကို ဖုံးကွယ်ရန် အကြောင်းပြချက်များဟုဆိုကာ မယုံကြည်သူများက ပယ်ချခဲ့သည်မှာလည်း နှစ်များစွာ ကြာပြီဖြစ်သည်။
သို့သော် ရေနံဈေးကွက်တွင် အိုပက်မဟုတ်သော အင်အားစုများ၏ ဈေးနှုန်းမြင့်တက်စေသော အင်အားသည် အိုပက်ကြိုးပမ်းခဲ့သော အရာများကို ပျက်စီးသွားစေနိုင်ကြောင်း ယင်းအဖွဲ့ကို မယုံကြည်သူများကပင် မကြာသေးမီက အသိအမှတ်ပြုလာခဲ့ကြသည်။ အထင်ရှားဆုံး အချင်းအရာမှာ တအိအိဈေးကျနေသော ဒေါ်လာဖြစ်သည်။ ရေနံကို ဒေါ်လာနှင့် ဈေးနှုန်းသတ်မှတ်သောကြောင့် ၂၀၀၂ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှစကာ ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများ၏ ငွေကြေးနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက ဒေါ်လာတန်ဖိုး သုံးပုံတစ်ပုံနီးပါး ကျဆင်းခဲ့သောကြောင့် အမေရိကန်တို့သည် ရေနံတစ်စည်အတွက် ဒေါ်လာ ၂၀ ကျော် ပိုသုံးနေရသည်။ ထို့ပြင် ဈေးကစားသူများကြောင့်လည်း ရေနံဈေး မြင့်တက်ကောင်းမြင့်တက်နိုင်သည်။ ကုန်စည်အားလုံးကို ဈေးကစား ကြိုးကိုင်ခြယ်လှယ်နိုင်သော်လည်း ရေနံကတော့ အထိမခံသည့်အမျိုးဖြစ်သည်။
ပထမအချက်။ ။ ရေနံသည် ထောက်ပံ့မှုအလျဉ်ပြတ်တတ်သော ကုန်စည်ဖြစ်သည်။ ဟာရီကိန်း သို့မဟုတ် နယ်စပ်စစ်ပွဲများကြောင့် ရေနံထုတ်လုပ်မှု ထိခိုက်တတ်သည်။
ဒုတိယအချက်။ ။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ရေနံစနစ်ကလည်း နားလည်ရန် အလွန်ခက်ခဲသည်။ ထုတ်လုပ်သူများ၊ ချက်လုပ်သန့်စင်သူများ၊ သယ်ယူပို့ဆောင်သူများနှင့် ဖြန့်ဖြူးသူများ အဆင့်ဆင့်ရှိနေသည်။ မည်သည့်နေရာတွင် မည်သည့်အချိန်၌ ရေနံမည်မျှလိုမည်ကိုမူ မည်သူမျှ အတိအကျမသိပေ။ ရေနံထုတ်လုပ်ရောင်းချသည့်စနစ်တွင် စာရင်းမည်မျှ ပိုနေသည်ကို ခန့်မှန်းရန်နှင့် ရေနံအလျဉ်ပြတ်မှုကို ကာကွယ်ရန် မည်သည့်ပမာဏမျှ သိုလှောင်ထားရမည်ကို ဆုံးဖြတ်ရန်ခက်ခဲသည်။ ဥပမာအားဖြင့် အမေရိကန်စွမ်းအင်ဌာနက အမေရိကန်တွင် ရေနံသိုလှောင်ထားမှု ကျဆင်းနေကြောင်း ကြေညာပါက ရေနံဈေးကွက်က ဈေးနှုန်းမြင့်တက်ခြင်းဖြင့် တုံ့ပြန်သည်။
ရေနံသည် မတည်ငြိမ်သော ကုန်စည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် နေ့စဉ် စွန့်စားခြင်းဖြင့် အမြတ်ရနေသော ကုန်သည်များကို ဆွဲဆောင်သည်။ ဈေးနှုန်းကလည်း နာရီနှင့်အမျှ အပြောင်းအလဲရှိသည်။ ဈေးနှုန်းကို အလောင်းအစားပြု စွန့်စားခြင်းသည် ရာဇ၀တ်မှုမဟုတ်သောကြောင့် ယင်းအလောင်းအစားများက ဈေးနှုန်းကို လွှမ်းမိုးလာသောအခါ ပြဿနာဖြစ်သည်။
အစဉ်အလာအားဖြင့် ရေနံဈေးနှုန်းသည် ရေနံတစ်စည် ထုတ်လုပ်သည့်စရိတ်နှင့် သုံးဆခန့်ကွာဟတတ်ကြောင်း နယူးယောက်ရှိ Oppenheimer & Co. မှ ရေနံအကြောင်းလေ့လာသူ Fadel Gheit က ပြောကြားခဲ့သည်။ ရေနံထုတ်လုပ်မှုစရိတ်သည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် တစ်စည်လျှင် ၁၅ ဒေါ်လာမှ ၁၉ ဒေါ်လာကြား ကုန်ကျသည်။ အမှန်တကယ် ရေနံဈေးနှုန်းသည် ၄၅ ဒေါ်လာနှင့် ၅၇ ဒေါ်လာဖြင့် မည်သည့်နေရာတွင်မဆို ၀ယ်ယူရသင့်သည်။ ရေနံတစ်စည် ၄၅ ဒေါ်လာသည် သင့်တင့်သောဈေးနှုန်းဖြစ်ကြောင်း အိုပက်က ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် ပြောကြားခဲ့ဖူးသည်။
ထို့ပြင် မလူးသာမလွန့်သာသော ဈေးကွက်များသည် နိုင်ငံရေးအဖြစ်အပျက်များ၊ ဟာရီကိန်း (သို့မဟုတ်) ဈေးကစားသူများ၏ အလောင်းအစားများကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော အနှောင့်အယှက်များ ဖြစ်သည်။
ဈေးကစားမှု အာမခံ (Speculator Premium) ကို မည်ကဲ့သို့ ထိန်းချုပ်နိုင်ပါမည်နည်း။
ဈေးနှုန်းမြင့်တက်မှုတိုင်းသည် ရေနံတင်ပို့ရောင်းချသူများအတွက် ဧရာမ ဆုလာဘ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဈေးကစားမှု အာမခံကြောင့် အီရန်သည် တစ်လဒေါ်လာ ၅.၅ ဘီလျံခန့် အမြတ်ထွက်နေသည်။ ထိုငွေများကို အန္တရာယ်ပေးနိုင်သော လုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုနိုင်သည်။ ထို့ပြင် တီဟီရန်အား စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုများကို ထေမိနိုင်သည်။
(International Herald Tribune တွင်ပါရှိသည့် Paul Roberts ရေးသားသော Why oil prices so hight? ဖြစ်ပါသည်။)
Technorati tags: oil, price, opec
နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ တရားစီရင်ရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေး၊ စီမံခန့်ခွဲရေး ကိစ္စအရပ်ရပ်ကို ကမ္ဘာ့အလယ်တွင် မတင့်တယ်စရာဖြစ်အောင်၊ ဖြောင့်မတ် မှန်ကန်သော လမ်းကြောင်းကို တိမ်းစောင်းအောင် လုပ်ဆောင်နေမှုများတွင် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုလည်း တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပါသည်။ တံစိုးလက်ဆောင်နှင့် လာဘ်လာဘယူပြီး မိမိလုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့် တာဝန်ဝတ္တရားများကို လွဲမှားစွာ ဆောင်ရွက်ပေးမှုကြောင့် တစ်ဖက် ကာယကံရှင်မှာ များစွာ နစ်နာရသလို နိုင်ငံတော်အုပ်ချုပ်သူ လူပုဂ္ဂိုလ်တို့အပေါ်တွင်လည်း အများပြည်သူ အထင်သေးစရာ၊ အပြစ် ပြောစရာများ ကြုံတွေ့ရတတ်ပါသည်။ ထို့ထက်ပိုဆိုးသည်မှာ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူများပြားပြီး အမှန်က အမှားဖြစ်၊ အမှားက အမှန်ဖြစ်ရာ က တိုင်းပြည်၏ အုပ်ချုပ်ရေးယန္တရားမှာလည်း ကမောက်ကမဖြစ်သွားပြီး မတရားခံရသူတို့က နာကျည်းချက်ဖြင့် လက်တုံ့ပြန်ခြင်းလည်း ကြုံတွေ့ရတတ်ပါသည်။
နိုင်ငံတော်အုပ်ချုပ်သူများအနေဖြင့် တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များ၊ ဝန်ထမ်းများ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူကင်းရှင်းရေး၊ အဂတိလိုက်စားမှု ပပျောက်ရေး တို့အတွက် ဥပဒေများ သတ်မှတ်ပြဌာန်းပေးထားပါသည်။ ၁၉၄၈ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၈ ရက် နေ့စွဲဖြင့် 'အဂတိလိုက်စားမှုတားမြစ်ရေး အက်ဥပဒေ' ကို ပြဌာန်းခဲ့သလို ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၆၁ မှ ၁၆၅ အထိ တို့တွင်လည်း ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းများကျူးလွန်သော သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်သောပြစ်မှုများ (offenses by or relating to public servants) ကိုလည်း ပြဌာန်းထားရှိပါသည်။
သို့သော်လည်း အကျင့်ပျက်ဝန်ထမ်းအချို့သည် လာဘ်လာဘမရလျှင် ဘာမျှ လုပ်ချင်ကိုင်ချင်ပုံမရ၊ လာဘ်ကိုမျှော်ကိုးပြီး လာဘ်ရမှသာ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပေးတတ်သဖြင့် လာဘ်မပေးနိုင်ပါက လုပ်ငန်းများကို ဖင့်နှေးစေပြီး ကြန့်ကြာအောင် လုပ်တတ်ကြသည်။ ထိုအခါ ကာယကံရှင်များက လုပ်ဆောင်မပေးသော ဝန်ထမ်းကို ကျော်ပြီး အစိုးရကိုသာ အပြစ်တင်တတ်ကြသဖြင့် အစိုးရလည်း နာမည် ပျက်ကိန်း ကြုံရသလို လည်ပတ်နေသော အုပ်ချုပ်ရေးယန္တရားလည်း ယိုင်နဲ့သွားရတော့သည်။
လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ ပပျောက်ရေးကိစ္စကို ထိန်းချုပ်ရာတွင် လာဘ်ပေးသူရော၊ လာဘ်ယူသူပါ နှစ်ဦးစလုံးက မိမိတို့ အသိတရားရှိရှိဖြင့် ထိန်းချုပ်ရန်လိုပါသည်။ အကြောင်းမှာ အဂတိလိုက်စားမှုတားမြစ်ရေး အက်ဥပဒေအရ လာဘ်ပေးသူ၊ လက်ယူသူ နှစ်ဦးစလုံးမှာ အပြစ် ရှိသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။
ကာယကံရှင်အနေဖြင့်လည်း မိမိရပိုင်ခွင့်များကို ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းထံမှ မှန်မှန်ကန်ကန် နည်းလမ်းတကျ ရယူဖို့လိုပါသည်။ ပြည်သူ့ ဝန်ထမ်းများ အနေဖြင့်လည်း နိုင်ငံတော်၏လစာကို ရရှိခံစားပြီးဖြစ်ရာ မိမိတာဝန်အရ လုပ်ဆောင်ပေးရမည့်ကိစ္စကို ဥပဒေလုပ်ထုံး လုပ်နည်းနှင့်အညီ သမာသမတ်ကျကျ လုပ်ဆောင်ပေးရမည် ဖြစ်ပါသည်။ မတော်လောဘနှင့်ယှဉ်ကာ ကိုယ်ကျင့်သိက္ခာ ဖောက်ဖျက်မှု များ ရှိလာလျှင် ဥပဒေ၏အပြစ်ပေးခြင်းကို ခံရနိုင်ပါသည်။
ဘာမှမဟုတ်သည့် လာဘ်ငွေလေးအတွက် ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းတစ်ဦး၏ ဘဝကြီးတစ်ခုလုံး ပျက်စီးသွားနိုင်သည်ကို သတိပြုသင့်ပါသည်။ ပို၍သတိပြုသင့်သည်မှာ လာဘ်ယူမှုကိစ္စကို တာဝန်ရှိသူ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်း၏ ဇနီးသည်က ပြုလုပ်ခဲ့လျှင်လည်း ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ဝန်ထမ်းတွင် အပြစ်ရှိပြီး ပြစ်ဒဏ်ခံရနိုင်ပါသည်။ ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၆၂ တွင် ''မည်သူမဆို ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းတစ်ဦးဦးအား ရာထူးဆိုင်ရာ ပြုလုပ်မှုတစ်ခုခုကို ပြုလုပ်စေရန်၊ ရှောင်ကြဉ်စေရန်၊ မျက်နှာလိုက်စေရန်၊ နှိမ်စေရန် သို့မဟုတ် လူတစ်ဦးတစ်ယောက်အတွက် ကောင်းကျိုးကိုသော်လည်းကောင်း၊ မကောင်းကျိုးကိုသော်လည်းကောင်း ပြုစေရန် ဥပဒေနှင့်မညီသောနည်းလမ်းဖြင့် သွေးဆောင်မှု ပြုလျှင် ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းကို လာဘ်ပေးမှုကျူးလွန်ရာရောက်၍ ထောင်ဒဏ်သုံးနှစ် သို့မဟုတ် ငွေဒဏ် သို့မဟုတ် ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံး ချမှတ် နိုင်ကြောင်း'' ပြဌာန်းထားသည်။
အလားတူ ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၆၃ တွင်လည်း ''ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းအပေါ်တွင် မိမိ၏သြဇာကို အသုံးပြုသည့်အတွက် တံစိုးယူလျှင် ထောင်ဒဏ်တစ်နှစ် သို့မဟုတ် ငွေဒဏ် သို့မဟုတ် ဒဏ်နှစ်ရပ်စလုံး ချမှတ်နိုင်ကြောင်း'' ပြဌာန်းထားသည်။ ပုဒ်မ ၁၆၄ တွင် ''ပြည်သူ့ ဝန်ထမ်းတစ်ဦးနှင့်စပ်လျင်း၍ တစ်ဆက်တည်းဖြစ်သော အထက်ပုဒ်မနှစ်ခုတွင် ဖော်ပြထားသည့် ပြစ်မှုတစ်ခုခုကို ကျူးလွန်ရာတွင် ထို ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းဖြစ်သူက ထိုပြစ်မှုကို အားပေးကူညီလျှင် ထိုပြည်သူ့ဝန်ထမ်းကို သုံးနှစ်ထိ ထောင်ဒဏ် သို့မဟုတ် ငွေဒဏ် သို့မဟုတ် ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံး ချမှတ်ရမည်'' ဟု ပြဌာန်းထားသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ ဥပမာ- ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းခင်ပွန်းအား ဇနီးဖြစ်သူက ၎င်း၏ မိတ်ဆွေအား ရာထူးခန့်ပေးရန် ကာယကံရှင်ထံမှ လာဘ်ယူပြီး ခင်ပွန်းသည်ကိုပြောရာ ခင်ပွန်းသည်ကလည်း ဇနီးပြောသည့်အတိုင်း လုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ရာတွင် ပြည်သူ့ဝန်ထမ်း ခင်ပွန်းသည်ရော ဇနီးသည်ပါ ပြစ်မှုပုဒ်မ ၁၆၂ နှင့် ၁၆၃ တို့ကို ကျူးလွန်ရာရောက်ပြီး ပုဒ်မ ၁၆၄ အရ နှစ်ဦးစလုံး ပြစ်ဒဏ်ခံရမည်ဖြစ်သည်။ ဤပြဌာန်းချက်များကိုကြည့်ပါက ဇနီးမယားများအနေဖြင့်လည်း ပြည်သူ့ဝန်ထမ်း ခင်ပွန်းသည်၏ တာဝန်ဝတ္တရားဆောင်ရွက်မှုများတွင် မမှန်ကန်သောနည်းလမ်းဖြင့် ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ရန်မသင့်ကြောင်း သတိပြု သင့်ကြောင်း တွေ့နိုင်ပါသည်။
အချုပ်အားဖြင့်တင်ပြရလျှင် ယနေ့ မြန်မာနိုင်ငံတော်အား စည်းကမ်းပြည့်ဝသော ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်သစ်ကြီးဖြစ်အောင် ကြိုးပမ်း တည်ဆောက်နေချိန်တွင် နိုင်ငံဝန်ထမ်း၊ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းများအနေဖြင့် သစ္စာ၊ သမာဓိ၊ သိက္ခာ၊ ကိုယ်ကျင့်တရားပြည့်ဝစွာဖြင့် နိုင်ငံ့ တာဝန်များကို မှန်မှန်ကန်ကန် စေတနာအပြည့်ထားကာ ဆောင်ရွက်သွားရန်နှင့် အဂတိလိုက်စားမှုကို အမြစ်ပါမကျန် တွန်းလှန် ဖြိုဖျက်သင့်လှကြောင်း စေတနာကောင်းဖြင့် ရေးသားလိုက်ရပါသည်။
(၂ဝဝ၇ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၂၁ ရက်နေ့ထုတ် The Crime Journal ပါ မောင်မောင်လှဌေး (ဥပဒေ) ၏ ''ရှောင်ရှားသင့်သော လာဘ်ပေးလာဘ်ယူကိစ္စ'' ဆောင်းပါးမှ ထုတ်နှုတ်ယူထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။)
Technorati tags: bribe,, public,, civil,, servant
အမေရိကန်နိုင်ငံ ကိုလိုရာဒိုပြည်နယ်မှာ အလွန်ကြီးမားတဲ့ ၀က်သစ်ချပင်ကြီးတစ်ပင် ရှိပါတယ်။ အဲဒီအပင်ရဲ့ သက်တမ်းဟာ နှစ် ၄၀၀ ကျော်နေပါပြီ။ တစ်နေ့မှာတော့ အဲဒီအပင်ကြီးဟာ အလိုအလျောက် လဲကျသွားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအပင်ဟာ အနှစ် ၄၀၀ အတွင်း မိုးကြိုး ၁၄ ကြိမ် အပစ်ခံခဲ့ရပေမယ့် မဖြုံခဲ့။ ပြင်းထန်းတဲ့ လေမုန်တိုင်း ဒဏ်ပေါင်းများစွာ ခံခဲ့ရပါတယ်။ မြေငလျင်တွေ လှုပ်ပေမယ့်လည်း လဲမကျ။ ဒါပေမယ့် ဘာကြောင့်များ လဲကျသွားရသလဲ ပညာရှင်တွေ ဆန်းစစ်လိုက်တော့ လား...လား...ပင်စည်ထဲမှာ အလွန်သေးငယ်တဲ့ ပိုးကောင်ကလေးတွေ ၀င်ရောက်စားသောက်နေခဲ့ကြတဲ့အတွက် လဲကျသွားခဲ့ကြောင်း တွေ့ခဲ့ရပါရောလား။
မြန်မာ့ဆိုရိုးစကားမှာလည်း "အသားထဲက လောက်ထွက်" "လူယုံသတ်လို့ သေတယ်" ဆိုတာမျိုးတွေ ရှိပါတယ်။ ပြင်ပက ရန်သူထက် အတွင်းရန်က ပိုပြီးကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့သဘောပါ။ ဒီအချက်ကို ကိုလိုရာဒိုက ၀က်သစ်ချပင်ကြီးက သက်သေထူနေပါပြီ။ လူဘ၀ရဲ့ ငြိမ်းချမ်းသာယာနေမှုကိုလည်း အပြင်လောကထက် အတွင်း စိတ်သဏ္ဍာန်က ပိုမိုဖျက်ဆီးနိုင်စွမ်းရှိတာကို ဆင်ခြင်ကြည့်ရင် တွေ့နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် အဲဒီ အတွင်းစိတ်တွေကို ပိုးကောင်လေးတွေနဲ့ ခိုင်းနှိုင်းချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ လူ့ကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာ အဲဒီလိုပိုးမျိုးများစွာရှိတဲ့အထဲမှာ အဆိုးဆုံး ပိုး ၅ မျိုးရှိပါတယ်။ အဲဒီပိုးလေးတွေ အကြောင်းကို ပြောပြချင်လို့ပါ။
လောဘ။ ။ ဒီပိုးကောင်လေးကတော့ ထူးချွန်အောင်မြင်လိုသူတွေအတွက်တော့ မရှိမဖြစ်တဲ့ အကျိုးပြု ပိုးကောင်လေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အောင်မြင်ထင်ရှားတဲ့သူတိုင်းဟာ သူတို့ရဲ့အလုပ်ကို လောဘနဲ့ လုပ်ကိုင်ခဲ့တဲ့သူတွေပါ။ ဒါပေမယ့် တန်ဆေးလွန်ဘေးဆိုတဲ့အတိုင်း အလွန်အကျွံဆိုရင်တော့ ဘေးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အတိုင်းအတာတစ်ခုထက် ကျော်လွန်လာရင်တော့ ကိုယ့်ကို ပြန်ကိုက်မယ့် ပိုးကောင်တစ်မျိုးပါပဲ။ လောဘကြီးလွန်တဲ့အခါ ကိုယ့်မှာတကယ်တမ်းမလိုအပ်တာတွေကိုလည်း လိုအပ်တယ်ထင်ပြီး လိုချင်တပ်မက်စိတ် ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ ဘ၀ဆိုတာကလည်း လိုချင်တိုင်း၊ တောင့်တတိုင်း ရနိုင်တာမျိုးက မဟုတ်ပြန်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် လောဘကြီးသူတွေဟာ လိုချင်တာမရတဲ့အတွက် စိတ်ပျက်ရ၊ စိတ်ညစ်ရနဲ့ အရမ်းကို ပင်ပန်းကြရပါတော့တယ်။ ဒီစိတ်နဲ့စား၊ ဒီစိတ်နဲ့သွားပြီး ဒီစိတ်နဲ့ပဲ အသက်ဆက်လာတဲ့အခါ ရှိပြီးသားအရာတွေကိုပါ လက်လွတ်ဆုံးရှုံးရတော့တာပါပဲ။ ဒါကြောင့် လောဘလွန်ကဲတဲ့သူဟာ အမြဲတမ်း ဂဏာမငြိမ်ဖြစ်နေရပြီး ငြိမ်းချမ်းမှုတွေနဲ့ အလှမ်းဝေးနေရတော့တာပေါ့။ ဒါကြောင့် 'လောဘ' ဆိုတာ လူကိုဖျက်တဲ့ ပိုးတစ်မျိုးလို ဆိုနိုင်ပါတယ်။
ရည်မှန်းချက်။ ။ ဒါကိုပြောရင် အများစုက ကျွန်တော့်ကို ငြင်းကြလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။ မှန်ပါတယ်။ ဘ၀ တိုးတက်ဖို့ဆိုတာ ရည်မှန်းချက်ရှိမှာ ဖြစ်နိုင်တာပါ။ ရည်မှန်းချက်မရှိသူဟာ ပဲ့မပါတဲ့လှေ၊ စတီယာရင်မပါတဲ့ကား၊ ရေဒါမပါတဲ့ လေယာဉ်လို ဦးတည်ရာရှာမရဘဲ စမ်းတ၀ါးဝါးနဲ့ ခရီးဆက်ရမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ရည်မှန်းချက် အထားမလွန်ဖို့တော့ အရေးကြီးပါတယ်။ မဖြစ်နိုင်တာကို ဖြစ်ရမယ်လို့ ရည်မှန်းချက်ထားလို့ မရပါဘူး။ ဥပမာအားဖြင့် ယောက်ျားကိုအလျှော့မပေးချင်စိတ်နဲ့ အပြိုင်ဆုတောင်းခဲ့လို့ နတ်ပြည်မှာ နတ်သားတစ်ဖက် ငါးရာရဲ့ ၀ိုင်းပြီး ပျော်ပါးခြင်းကိုခံရတဲ့ နတ်သမီးတစ်ယောက်အကြောင်း ဟာသပုံပြင်လေးကို နမူနာယူသင့်ပါတယ်။ ကိုယ့်ခွန်အားနဲ့မမျှတဲ့ ရည်မှန်းချက်တွေ မချမိဖို့ အလွန်ကို အရေးကြီးပါတယ်။ မတော်လောဘနဲ့ယှဉ်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ရည်မှန်းချက်တွေ့ကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကို အကြီးအကျယ် ထိခိုက်စေတတ်ပြီး နောက်ဆုံး ထိုသူကိုယ်တိုင် အဲဒီရည်မှန်းချက်ရဲ့ သားကောင်အဖြစ် ပျက်စီးဘ၀ဆုံးသွားတာမျိုး ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီလိုရည်မှန်းချက်မျိုးတွေ ရှိနေပြီဆိုရင်တော့ မြန်မြန်မောင်းထုတ်ပစ်မှသာ ကျွန်တော်တို့ ပိုးကိုက်ခြင်းဘေးမှ ကင်းဝေးမှာပါ။
မနာလိုခြင်း။ ။ မနာလိုစိတ်ဆိုတာ မမှန်ကန်သော ယှဉ်ပြိုင်မှုကြောင့် ဖြစ်လာတာမျိုးပါ။ လူအများစုက သူ့အကြောင်းနဲ့သူ ဖြစ်တဲ့ကိစ္စကို ကိုယ့်အကြောင်းနဲ့ကိုယ် မဖြစ်တဲ့ကိစ္စနဲ့ ယှဉ်ကြည့်တတ်ကြပါတယ်။ သူများက ကျားကုတ်ကျားခဲ ကြိုးစားနေချိန်တုန်းကတော့ ကိုယ်က ပေါ့ပေါ့နေ ပေါ့ပေါ့စားခဲ့ပြီး၊ သူအောင်မြင်သွားတော့မှ မနာလိုဖြစ်တာဟာ မှန်ကန်တဲ့ ယှဉ်ပြိုင်မှု မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ်ကမှ ကြိုးစားချင်စိတ် မရှိဘဲ နေ့မအိပ်ညမအိပ် ကြိုးစားပြီး အောင်မြင်သွားတဲ့သူတစ်ယောက်ကို မတရားစီးပွားရှာသူလို့ အမနာပပြောတာဟာ မှန်ကန်တဲ့ လုပ်ရပ်မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ အဲဒီလိုလူမျိုးဟာ သူ့ရဲ့ မူမမှန်စိတ်၊ မနာလိုစိတ်တွေက သူတို့ကို အမြဲချောက်လှန့်ခြင်းကို ခံကြရတတ်ပါတယ်။
ဒေါသ။။ ဒေါသဆိုတာမျိုးဟာ လူတိုင်းနဲ့မကင်းနိုင်ပေမယ့်လည်း အလွန်ဆိုးရွားတဲ့ ပိုးတစ်ကောင် ဖြစ်လို့နေပါတယ်။ ဒေါသဟာ ပူလောင် ပါတယ်။ ဒေါသထွက်နေသူတစ်ယောက်ဟာ အသက်ရှုမြန်လာပါတယ်။ နှလုံးခုန်နှုံးလည်း မြန်လာပါတယ်။ အသက်ရှုမ၀တော့ဘဲ အဆုတ်ကို အလွန်အားစိုက်ကာ ရှုရှိုက်ရပါတယ်။ တစ်ချို့ အလွန်ဒေါသကြီးသူတွေဆိုရင် တက်သွားတာမျိုး၊ သတိလစ်သွားတာမျိုးပင် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဆေးပညာရှင်များက နှလုံးရောဂါဖြစ်ရခြင်း၏ အကြောင်းအရင်းခံတစ်ရပ်မှာ ဒေါသကြီးခြင်းပင်ဖြစ်သည်ဟု သတ်မှတ်ကြပါတယ်။ ဒေါသစိတ် မွှန်နေချိန်မှာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာလည်း အမှားများတတ်ပါတယ်။ ဒေါသဟာ ပျော်ရွှင်မှုရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့အတွက် လူတွေကို အမြဲတမ်း အရှုံးပေါ်စေပါတယ်။
မာန။ ။ ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ထဲက နောက်ဆုံးပိုးတစ်ကောင်ကတော့ မာနပဲဖြစ်ပါတယ်။ မာနဆိုတာကတော့ စိတ်ကြီးဝင်ခြင်း၊ ဘ၀င်မြင့်ခြင်း၊ ထောင်လွှားခြင်းလို့ ဖွင့်ဆိုနိုင်ပါတယ်။ မာနထောင်လွှားသူဟာ ကိုယ့်ရဲ့ အရှိအတိုင်းထက် ပိုပြီး ရှုမြင်တတ်တဲ့အတွက် ဘ၀င်မြင့်သူပါပဲ။ ဒါကြောင့် သူတစ်ပါးရဲ့ မျက်မုန်းကျိုးခြင်းကို ခံရတတ်ပါတယ်။ မာနကြီးသူဟာ နေရာတကာမှာ မာနကိုသာ အလေးထားပြီး မာနကို ထိခိုက်ခံရ ရင် အလွန်ကို စိတ်ဆင်းရဲကြရပါတယ်။ လူတွေကို မတူသလို မတန်သလို ဆက်ဆံတတ်တဲ့အတွက်လည်း အထီးကျန်တတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မာနဟာလည်း လူကိုဖျက်ဆီးတဲ့ပိုးတစ်မျိုးအဖြစ် သတ်မှတ်လို့ရတဲ့ အရာတစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အနှစ် ၄၀၀ လုံးလုံး ပြင်ပကို ရာသီဥတုဒဏ်ကို ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်ခဲ့တဲ့ ၀က်သစ်ချပင်ကြီး နောက်ဆုံးမှာ လက်တစ်ဖျစ်စာသာရှိတဲ့ ပိုးကောင်လေးတွေရဲ့ လှိုက်စားမှုကြောင့် အလိုအလျောက်ပြိုလဲကျခဲ့ရတာကို ဆင်ခြင်သုံးသပ်နိုင်ကြပါစေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။
(ဆရာဖေမြင့် ဘာသာပြန်ရေးသားထားတဲ့ မူမှန်စိတ်၊ မူမှန်အတွေး၊ မူမှန်အကျင့်အကြံ (၂) စာအုပ်မှ ငြိမ်းချမ်းမှုကို ဖျက်ဆီးသူများအား မှီငြမ်းထားပါသည်။)
Technorati tags: greed, ambition, jealousy, proud, anger Powered by ScribeFire.
အတ္တသမံ ပေမံနတ္ထိ - ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချစ်သောအချစ်နှင့် တန်းတူရည်တူ ဒီဂရီပါဝါတူသော အချစ်မည်သည မရှိလို့ ဆိုစကားရှိပါတယ်။ သက်ရှိသတ္တ၀ါတိုင်းဟာ ကိုယ့်အသက်ကို အခင်တွယ်ဆုံး၊ အချစ်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အသက်ရှင်လိုကြပါတယ်။ အသက်ရှင်လို၊ အသက်ရှည်လိုတဲ့အတွက် အသက်မွေးကြရပါတယ်။ အသက်ရှိသော သတ္တ၀ါတိုင်း အသက်မွေးဖို့အတွက် အစာရှာကြရပါတယ်။ စားနပ်ရိက္ခာဆိုသည့်အတိုင်း အစားအစာဟူသမျှကို ရိက္ခာလို့ ခေါ်ပါတယ်။ တိရစ္ဆာန်တွေမှာလည်း ၀မ်းကရှိနေတဲ့အတွက် ၀မ်းစာရိက္ခာလိုပြီး၊ လူတွေမှာလည်း သမုဒ္ဒရာ ၀မ်းတစ်ထွာအတွက် ၀မ်းစာရိက္ခာလိုပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ လူနဲ့ တိရစ္ဆာန် မတူတာက တိရစ္ဆာန်တွေမှာ ရိက္ခာသာလိုပြီး သိက္ခာမလိုပါဘူး။ လူတွေမှာတော့ ရိက္ခာတစ်ခုတည်းနဲ့ မလုံလောက်သေးဘဲ သိက္ခာရှိဖို့ပါလိုပါတယ်။ ရိက္ခာသာ အလေးထားပြီး သိက္ခာကို အလေးမထားရင် လူနဲ့ တိရစ္ဆာန် ဘာမျှထူးခြားတော့မည် မဟုတ်ပေ။
အာဌာဝကဘီလူးက "အရှင်ဘုရား - ဘယ်ပုံဘယ်နည်း အသက်မွေးခြင်းဟာ အကောင်းဆုံးပါလဲ" လို့ ဘုရားကို မေးလျှောက်တော့ ဘုရားက "ပညာနဲ့အသက်မွေးတာ အကောင်းဆုံး" လို့ ဖြေတော်မူခဲ့ပါတယ်။ အဌကထာဆရာက ပညာနှင့် အသက်မွေးခြင်းဟူသည် နှစ်ဖက်မြင်ပုဂ္ဂိုလ်တို့၏ အသက်မွေးခြင်းလို့ ဖွင့်ဆိုပါတယ်။ နှစ်ဖက်ဟူသည် လက်ရှိပစ္စုပ္ပန်ဘ၀နဲ့ နောင်တမလွန်ဘ၀ကို ဆိုလိုတာပါ။ နောက်တစ်နည်းအနေနဲ့ သူ့ဘက်၊ ကိုယ့်ဘက်၊ သူ့ဖို့၊ ကိုယ့်ဖို့ ကိုလည်း ဆိုလိုပါတယ်။ သူသူကိုယ်ကိုယ် အသက်မွေးကြ၊ ၀မ်းကျောင်းကြရမှာ ပစ္စုပ္ပန်အရေးနဲ့ တမလွန်အရေးဆိုပြီး နှစ်ဖက်မျှတွေးဖို့လိုပါတယ်။ နှစ်ဖက်မျှမြင်ရမယ်။ သူ့ဖို့ကိုယ့်ဖို့ နှစ်ဖက်မျှတွေးရပါမယ်။
လူဆိုတာ တစ်ယောက်တည်းနေတော့ တစ်ဝမ်းတစ်ခါးသာ ရှိပါတယ်။ နှစ်ယောက်ပေါင်းမိတော့ နှစ်ဝမ်းနှစ်ခါး။ ဒီလိုနဲ့ ၀မ်းတွေခါးတွေက တိုးပွားများပြားလာမယ်။ ၀မ်းတွေရှိတော့ ၀မ်းစာရှာကြရပါရော။ ဒီလို ၀မ်းစာရှာကြရာမှာ တချို့က ၀မ်းသာဝတယ်၊ ကုသိုလ်က မရ။ တချို့ကျ ကုသိုလ်သာရတယ်၊ ၀မ်းက မ၀။ ပီတိစားပြီး အားရှိနေကြရတယ်။ တချို့က ကုသိုလ်လည်းမရ၊ ၀မ်းလည်းမ၀။ တချို့များ ကျတော့ ကုသိုလ်လည်းရ၊ ၀မ်းလည်းဝကျပါတယ်။ ပညာနဲ့ အသက်မွေး ၀မ်းကျောင်းသူဟာ ကုသိုလ်လည်းရ၊ ၀မ်းလည်းဝတဲ့အမျိုးပါပဲ။
ဒီနေရာမှာ ပညာဆိုတာ အသိပညာ၊ အသိစိတ်ဓါတ်၊ အသိတရား ဖြစ်ပါတယ်။ အသိစိတ်ဓါတ်ရှိသူဟာ ကောင်းတဲ့အပြုအမူ၊ ကောင်းတဲ့ အလေ့အထရှိတယ်။ ကောင်းတဲ့အပြုအမူ၊ ကောင်းတဲ့အလေ့အထဟာ သီလသိက္ခာ ပါပဲ။ အသိစိတ်ဓါတ်ရှိသူဟာ ကောင်းတဲ့စိတ်ထား ရှိတယ်။ စိတ်ထားကောင်းတယ်ပေါ့။ ကောင်းတဲ့စိတ်ထားရှိလို့ စိတ်ထားကောင်းတာဟာ သမာဓိသိက္ခာဖြစ်ပါတယ်။ သမာဓိမျာ 'သံ' က ကောင်းခြင်းလို့ အဓိပ္ပါယ်ထွက်ပြီး 'အဓိ' က စိတ်ထားလို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် သမာဓိဆိုတာ စိတ်ထားကောင်းခြင်းပဲ ဖြစ်ပါ တယ်။ အသိစိတ်ဓါတ်၊ အသိတရား၊ အသိပညာကိုယ်တိုင်ဟာ ပညာသိက္ခာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီတော့ အသိစိတ်ဓါတ်၊ အသိတရားရှိသူမှာ ရိက္ခာနဲ့ သိက္ခာက တစ်သားတည်းကျနေပါတယ်။ အူမနဲ့ သီလ ထပ်တူမျှနေပါတယ်။ ဘုရားရှင်မိန့်တော်မူတဲ့ ပညာနဲ့အသက်မွေးတာ အကောင်းဆုံးဆိုတာက ဒီလို ရိက္ခာနဲ့ သိက္ခာ တစ်ထပ်တည်းကျတဲ့ အသက်မွေးခြင်း၊ အူမနဲ့သီလ ထပ်တူမျှနေတဲ့ အသက်မွေးခြင်းကို ဆိုလိုပါတယ်။ ဒီလို အသက်မွေးနိုင်သူဟာ တော်လည်းတော်၊ ကောင်းလည်းကောင်းတဲ့ အတွက် သူတော်ကောင်း မည်ပါတယ်။
အူမနဲ့သီလကို တစ်သီးတစ်ခြားခွဲထားလို့မရ၊ တစ်ဖက်ဖက် အစွန်းထွက်လို့မရ၊ မျှနေမှသာ သဘာဝကျပါတယ်။ လူတိုင်းမှာ အူမရှိပြီး အူမတိုင်းလည်း တောင့်ဖို့လိုပါတယ်။ အူမတောင့်ခြင်းဟာ သီလစောင့်ခြင်းကို ကျေးဇူးပြုနိုင်သလို သီလစောင့်ခြင်းကလည်း အူမတောင့်ဖို့အတွက် ကျေးဇူးပြုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ သီလဆိုတာ ကောင်းသောအလေ့အထ၊ ကောင်းသောအပြုအမူဖြစ်တဲ့အတွက် ကောင်းသောအလေ့အထတွေရှိရင် ကောင်းတဲ့အပြုအမူတွေပြုမူကြရင် အူမတွေ တောင့်လာကြမှာ မလွဲပါပဲ။
(၁၂ ရက် ၁၂ လ ၂၀၀၇ ခုနှစ်ထုတ် Weekly Eleven News တွင်ပါရှိသော အရှင်သံဝရာလင်္ကာရ (ဓမ္မပိရဆရာတော်) ၏ အူမနှင့် သီလ ဆောင်းပါးမှ ထုတ်နှုတ်ထားပါသည်။)
Technorati tags: dahmma,, buddhism,, buddha
နိုင်ငံရေးအကြောင်းပြောရင် နိုင်ငံတော်နဲ့ အစိုးရအပိုင်းကို ထည့်မပြောလို့မရပါဘူး။ နောက်ပြီး နိုင်ငံရေးမှာ စနစ် system ဆိုတာ ရှိရပါတယ်။ စနစ်တစ်ခုဟာ နိုင်ငံတော်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကို လွှမ်းမိုးတတ်ပါတယ်။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ရသူတွေဟာ တစ်ဦး တစ်ယောက်ချင်းဖြစ်နိုင်သလို အဖွဲ့အစည်းနဲ့လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် စနစ်တစ်ခုရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကို ခံရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး ပြည်သူဆိုတာရှိတယ်။ ပြည်သူ့အသံဆိုတာ ရှိတယ်။ မီဒီယာရှိတယ်။ အတိုက်အခံဆိုတာလည်း ရှိတယ်။ လက်ရှိ အနေအထားတွေကို ဖိအားတွေအမျိုးမျိုးပေးပြီး နောက်ကွယ်က တွန်းအားပေးနေတတ်တာ နိုင်ငံရေးရဲ့ ၀ိသေသတွေဖြစ်လို့ သိပ်ပြီးထူးခြားတယ်လို့တော့ မဆိုနိုင်ပါဘူး။ နိုင်ငံရေးစနစ်ကို ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေနဲ့ တိုင်းတာလို့မရပါဘူး။ ပုံသေ သတ်မှတ် လို့လည်း မရပါဘူး။ လူ့ဘောင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဟာ ဘယ်လောက်ထိ တိုးတက်ကျယ်ပျံ့မှုရှိတယ်၊ ဘယ်လောက် အတိုင်းအတာ အထိ ဖော်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိတယ်၊ ဘယ်လောက် လွှမ်းမိုးသက်ရောက်မှုရှိတယ်ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နိုင်ငံရေးဟာ အမျိုးမျိုး ကွဲပြားခြားနားနိုင်ပါတယ်။
နိုင်ငံတော်လို့ဆိုလိုက်ရင် ခိုင်မြဲသောသဘောဆောင်သွားပါတယ်။ နိုင်ငံတော်မှာ အစိုးရအဖွဲ့ဆိုတာ ရှိရပါတယ်။ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ တရားစီရင်ရေးအတွက် တရားရုံး၊ အေးချမ်းလုံခြုံရေးအတွက် ရဲတပ်ဖွဲ့ဆိုတာတွေ ထားရပါတယ်။ ဒါတွေကိုထားဖို့လိုတယ်ဆိုတာ လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သလို၊ မရှိမဖြစ်အနေနဲ့ အားလုံးက လက်ခံထားကြရတဲ့ သတ်မှတ်ချက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတော်ဆိုတဲ့ သတ်မှတ်ချက်အောက်မှာ ဥပဒေချမှတ်ဖို့၊ ချမှတ်ထားတဲ့ဥပဒေကို လိုက်နာဖို့ဆိုတာတွေကလည်း ဖွဲ့စည်းသတ်မှတ်ထားတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ မလွဲမသွေ လုပ်ဆောင်ကြရမယ့် တာဝန်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတော်ဆိုတာ ပထ၀ီအနေအထားအရ သတ်မှတ်ထားတဲ့ဘောင်အတွင်းမှာ "တိုင်းပြည်" လည်းဖြစ်နိုင်သလို "လူမျိုး" လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
"အစိုးရ" ဆိုတာကတော့ ဥပဒေပြုခြင်း၊ ဥပဒေကို အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း၊ ဥပဒေကို လိုက်နာစေခြင်းဆိုတဲ့ သဘောသက်ရောက်ပါတယ်။ အစိုးရဆိုတာကို ကျဉ်းမြောင်းတဲ့အမြင်နဲ့ကြည့်လိုက်ရင် နိုင်ငံတော်ရဲ့အာဏာကို ချုပ်ကိုင်ထားတဲ့ အဖွဲ့လို့မြင်ကြပါလိမ့်မယ်။ ဒီလိုပြောရတာကလည်း အစိုးရဖွဲ့ကြဟေ့လို့ အခွင့်ရလိုက်တာနဲ့ ရလိုက်တဲ့ အုပ်စုတစ်စု သို့မဟုတ် ပါတီတစ်ပါတီက နိုင်ငံတော်ကြီးတစ်ခုလုံးကို သူစွဲကိုင်ထားတဲ့ နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ မူဝါဒသဘောတရားတွေ၊ စနစ်တွေနဲ့ အကောင်အထည်ဖော်ပြီး တည်ဆောက်ကြရပါတော့တယ်။
အစိုးရဆိုတာ သူတို့အဖွဲ့ချမှတ်ထားတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် ဥပဒေတွေအတိုင်း ပြည်သူပြည်သားတွေ လိုက်နာနိုင်အောင် လုံခြုံမှုပေးနိုင်ရပါတယ်။ နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးနဲ့ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးလို့ လွယ်လွယ်နဲ့သုံးလိုက်ရင် သဘောပေါက်လိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်။ အစိုးရအနေနဲ့ သူဖန်တီးချင်တဲ့ မူဝါဒသဘောတရားတွေ၊ စနစ်တွေအောင်မြင်ဖို့ အပိုင်းနှစ်ပိုင်းနဲ့ လုပ်ဆောင်ကြရပါတယ်။ ပထမတစ်ပိုင်းက "အာဏာ" ဖြစ်ပါတယ်။ အာဏာဆိုတာ ဖြစ်သင့်ဖြစ်ထိုက်တာကို မဖြစ်မနေလိုက်နာကြရအောင် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကို မုန်းနေတဲ့သူကို ပြုံးပြပြီး သွားခိုင်းနေလို့ အောင်မြင်ချင်မှာပေါ့။ အာဏာကိုတည်မြဲစေဖို့ အမိန့်ဆိုတာကို သုံးသင့်ရင်သုံးရပါတယ်။ ငါတို့ ဒါတွေ ဆုံးဖြတ်ထားတယ်။ လိုက်ကိုလိုက်နာရမယ်။ သူလိုက်နာပြီး ငါမလိုက်နာဘူးဆိုတာမျိုး မရှိစေရပါဘူး။ မလိုက်နာရင် အရေးယူမယ်ဆိုတာမျိုးတွေကိုလည်း ပြဌာန်းပေးကြရပါတယ်။ ချမှတ်ထားတဲ့ မူဝါဒတွေ၊ သဘောတရားတွေကို အောင်မြင်ချင်ရင် အာဏာကို ကျင့်သုံးရတာဟာ နိုင်ငံရေးမှာ လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
အာဏာကိုလက်ကိုင်ထားပြီး သုံးခွင့်ရှိတဲ့ အစိုးရအနေနဲ့ ဥပဒေကို မလေးစားမလိုက်နာသူတွေ ကြောက်လောက်တဲ့ အနေအထား၊ အရှိန်အ၀ါလည်း ရှိနေရပါလိမ့်မယ်။ ဘိန်းစားကနေ ကံကောင်းလို့ ဘုရင်တက်ဖြစ်တဲ့ခေတ် မဟုတ်ပါဘူး။ ဖုတ်သွင်းရထားဆိုက်လာလို့ ဘုရင်လုပ်မယ်ဆိုတာမျိုးလည်း မရှိတော့ပါဘူး။ ပညာမတတ်၊ အရည်အချင်းမရှိသူတွေက တိုင်းပြည်အာဏာလိုချင်ပါတယ်လို့ အော်နေတိုင်းလည်း ပြည်သူအများရဲ့အကျိုးအတွက် ၀ကွက်အပ်လို့ မရပါဘူး။ အာဏာကို အစိုးရသာ သုံးခွင့်ရှိတယ်ဆိုတော့ အရည်အချင်းပြည့်ဝတဲ့ အစိုးရဆိုတာ ဘယ်ကနေလာသလဲဆိုတာ သေချာစွာသုံးသပ်သင့်တဲ့ နိုင်ငံရေးကိစ္စဖြစ်လာရပါတော့တယ်။
ဒုတိယအနေနဲ့ အစိုးရမှာ အာဏာဆိုတာရှိသလို လုပ်ပိုင်ခွင့်လည်း ရှိတယ်လို့သိထားရပါမယ်။ အစိုးရဆိုတာ အာဏာနဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုအသုံးပြုပြီး ပြည်သူကို ထိန်းသိမ်းအုပ်ချုပ်နိုင်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ဖို့ လိုပါတယ်။ လုပ်ပိုင်ခွင့်နဲ့ အာဏာကို အသုံးပြုခွင့်တွေဟာ ကိုယ်ကျင့်တရားနဲ့လည်း ဆိုင်ပါတယ်။ လူတစ်ဦးချင်းဖြစ်စေ အဖွဲ့အစည်းမှာဖြစ်စေ အပြန်အလှန် လေးစားလိုက်နာခြင်းဆိုတာ ရှိရပါတယ်။ လူရယ်လို့ဖြစ်လာကတည်းက ငါ သူပုန်ထဖို့ လူဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးလို့ သဘောပေါက်ထားရပါမယ်။ လူ့ဘောင်အဖွဲ့အစည်းနဲ့နေသူတွေဖြစ်လို့ လူ့ဘောင်က သတ်မှတ်ချက်တွေကို လိုက်နာကြရပါလိမ့်မယ်။ လူသားရယ်လို့ဖြစ်လာကတည်းက အခြေခံလိုက်နာရမယ့်စံတွေကို သတ်မှတ်ပြီးသားဖြစ်နေလို့ ဘောင်ထဲကထွက်ချင်လို့လည်း မရပါဘူး။ ဘောင်ထဲကနေ ကိုယ်သန်ရာ ကိုယ်ပြောပြီး ငါတကောကောနေလည်း မောရုံပဲရှိပါလိမ့်မယ်။ နိုင်ငံသားဆိုတာ အစိုးရအုပ်ချုပ်ခြင်းကို လေးစားလိုက်နာရပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ်လူဖြစ်နေရတဲ့လောကမှာ ကိုယ်က ဘာမှမဟုတ်ရင် အုပ်ချုပ်မှုကိုခံရတာ သဘာဝပါပဲ။
လွတ်လပ်သော ဒီမိုကရေစီစနစ်မှာ အာဏာဆိုတာ လုပ်ပိုင်ခွင့်နဲ့ အတူယှဉ်တွဲပြီး ပေါ်ပေါက်လာရပါတယ်။ အစိုးရဆိုတာ အာဏာနဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို လိုက်နာစောင့်ထိန်းကြရတဲ့သူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အုပ်ချုပ်ခွင့်အာဏာဆိုတာ ပြည်သူက ပေးအပ်ထားလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ တရားဥပဒေနဲ့ အာဏာသက်ရောက်စေဖို့ တရားရုံးတွေ ပေါ်လာရတယ်။ ပြဌာန်းထားတဲ့ ဥပဒေကို မလိုက်နာရင် အရေးယူကြရပါတယ်။ ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်သူတွေကို ရဲတွေက ဖမ်းဆီး အရေးယူပေးကြရပါတယ်။ အာဏာနဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့် ကင်းကွာသွားချိန်ဟာ နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်ချိန်နဲ့ အကြမ်းဖက်လိုမှုတွေ ပြင်းထန်နေချိန်မှာ ဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ ဆန့်ကျင်ပုန်ကန်မှုတွေ ဖြစ်ပေါ်လာရင်၊ လက်ရှိ အစိုးရကို ခြိမ်းခြောက်လိုမှုတွေဖြစ်လာရင်၊ ဥပဒေကို မလိုက်နာရင် အချုပ်အခြာအာဏာကို ထိပါးခြင်းလို့လည်း သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။
(၂၀၀၇ ဒီဇင်ဘာလထုတ် မျက်မှောက်ရေးရာမဂ္ဂဇင်းတွင် ပါရှိသည့် တင်ညွန့်ရေးသားသော နိုင်ငံရေးနှင့် နိုင်ငံရေးသမား ဆောင်းပါးမှ ကောက်နုတ်ထားပါသည်။)
Technorati tags: state, government, politics Powered by ScribeFire.
နိုင်ငံရေးဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ လူတိုင်းလောက်နီးနီး ရင်းနှီးကြပါတယ်။ နိုင်ငံရေးဆိုရင် ပါတီထောင်ကြတာလို့လည်း လူသိများပါတယ်။ နိုင်ငံရေးဆိုတာ ပြည်သူ့အရေးလို့ သိသူကတော့ နည်းပါတယ်။ လူသားအချင်းချင်း ပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှုဆိုတာ မဖြစ်မနေအရေးပါတဲ့ အကြောင်းအရာတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ လူဆိုတာ အထီးတည်း နေလို့မရပါဘူး။ အသိုင်းအ၀ိုင်းနဲ့ နေကြရပါတယ်။ ကိုယ်နေတဲ့ဝန်းကျင်က သေးတော့ မိသားစု၊ ကြီးတော့ နိုင်ငံဖြစ်လာပါတယ်။ နိုင်ငံရေးဆိုတာ အုပ်စုကြီးတစ်ခုအတွင်းမှာရှိတဲ့ သီးခြား တစ်ဦးချင်းစီရဲ့ အပြုအမူ၊ အနေအထိုင်၊ လုပ်ဆောင်မှုတွေကို လေ့လာခြင်းလို့လည်း ဆိုနိုင်ပါတယ်။ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွင်း အချင်းချင်းဆက်ဆံရေး၊ စီမံခန့်ခွဲရေး၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်ရေး၊ ချမှတ်ထားတဲ့ အဆုံးအဖြတ်တွေကို ပြီးမြောက်အောင်ဆောင်ရွက်ရေး၊ သတ်မှတ်ချက်များ ပြဌာန်းရေးဆိုတာတွေ လုပ်ဆောင်လာကြရတယ်။ ဒါကို နိုင်ငံရေးလို့လည်း ပြောနိုင်ပါတယ်။
နိုင်ငံရေးလို့ပြောရင် အာဏာဆိုတာလည်း မဖြစ်မနေ ထည့်ပြောရပါတယ်။ နိုင်ငံရေးဆိုသည်မှာ အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ သိပ္ပံပညာဖြစ်သကဲ့သို့ ၀ိဇ္ဇာပညာလည်းဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတော်၏ ဖွဲ့စည်းပုံအသွင်သဏ္ဍာန်၊ အုပ်ချုပ်မှုအပိုင်းတို့သည် သိပ္ပံနည်းကျ စီမံရသောကြောင့် သိပ္ပံပညာဖြစ်ပြီး၊ တစ်နိုင်ငံနှင့်တစ်နိုင်ငံ ပေါင်းကူးဆက်ဆံရမှုများတွင် စောင့်ထိန်းအပ်သော တရားများကို လိုက်နာကြရခြင်းကြောင့် ၀ိဇ္ဇာပညာလည်းဖြစ်ပါသည်ဟု Oxford အင်္ဂလိပ် အဘိဓါန်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ Harold Lasswell (1936) ကလည်း နိုင်ငံရေးဆိုတာ ဘာကို၊ ဘယ်အချိန်မှာ၊ ဘယ်လို ရအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတာကို သိခြင်းလို့ ဆိုပါတယ်။ Bertrand de Jouvenal (1963) ကတော့ နိုင်ငံရေးဆိုတာ လူကို လူက မောင်းနှင်တဲ့စွမ်းအားတဲ့။ David Easton (1979) က နိုင်ငံရေးဆိုတာ အာဏာရှိသူက ခွဲဝေပိုင်းဖြတ်ပေးရသော တန်ဖို့ လို့ ဆိုထားပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့် နိုင်ငံရေးဆိုသည်မှာ နိုင်ငံတော် သို့မဟုတ် အခြားနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများကို လမ်းညွှန်ပေးခြင်း၊ စီမံအုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ ၀ိဇ္ဇာ သို့မဟုတ် သိပ္ပံပညာ ဖြစ်သည်လို့ Oxford Concise Dictionary of Politics မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ လူမှုရေးဆိုင်ရာသဘောအရတော့ နိုင်ငံရေးဆိုတာ တစ်ဦးတစ်ယောက်ကနေ စီမံအုပ်ချုပ်ရတာမျိုးလို့ဆိုရင် သဘောကျချင်မှ ကျကြပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် လိုအပ်ချက်အရကတော့ ဒီလိုလုပ်ဆောင်ဖို့ လိုအပ်ကောင်း လိုအပ်နိုင်ပါတယ်။
လူဆိုတာက စဉ်းစားမှု ရင့်သန်သူတွေဖြစ်လေတော့ နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး အတွေးအမြင်တွေ အတော်လေးကွဲပြား ကြပါတယ်။ အတိုက်အခံတွေလုပ်ကြတယ်။ သဘောထားတွေကွဲကြတယ်။ နိုင်ငံတော်ရဲ့ ပင်ကိုယ်သဘာဝကိုက မတူညီများ၊ ၀ိရောဓိများနှင့် မကင်းနိုင်တာကြောင့် နိုင်ငံအချင်းချင်း၊ လူမျိုးအချင်းချင်းလည်း စစ်ပွဲတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေ မတူညီတာ၊ အလိုလောဘတွေကြောင့်လည်း စစ်တွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ နိုင်ငံရေးလို့ ပြောလိုက်တာနဲ့ ကိုယ်မဟုတ်တာလုပ်တာကိုလည်း လူ့အခွင့်အရေးလို့ ကိုင်ပေါက်လိုက်ကြတော့တယ်။ လူတွေမှာကလည်း ချမှတ်ထားတဲ့ စည်းကမ်းဥပဒေတွေကို လိုက်နာချင်သူရှိသလို အမြဲဆန့်ကျင်နေတဲ့သူတွေလည်း ရှိတတ်ပါတယ်။ မိမိအကျိုးစီးပွားကို မထိခိုက်သရွေ့ အကောင်းမြင်တတ်ပြီး အကျိုးစီးပွားကိုထိခိုက်တာနဲ့ အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးတယ်ဆိုပြီး ဖြစ်ကြပြန်တော့ နိုင်ငံရေးဆိုတာ လူ့အရေး၊ လူတိုင်းရဲ့အလိုဆန္ဒအရေးတို့ကို မဖြည့်ပေးနိုင်သေးသမျှ ပေးကားပေး၏ မရ၊ ကျွေးကားကျွေး၏ မ၀ဆိုသလို ဖြစ်နေမှာပါပဲ။
(၂၀၀၇ ဒီဇင်ဘာလထုတ် မျက်မှောက်ရေးရာမဂ္ဂဇင်းတွင် ပါရှိသည့် တင်ညွန့်ရေးသားသော နိုင်ငံရေးနှင့် နိုင်ငံရေးသမား ဆောင်းပါးမှ ကောက်နုတ်ထားပါသည်။ နိုင်ငံတော်နှင့် အစိုးရ အကြောင်းကိုလည်း ဆက်လက်ရေးသားပါဦးမည်။)
Technorati tags: politics, နိုင်ငံရေး Powered by ScribeFire.